"Ikhasimende Kuqala" Kumele kube yiMantra | Martech Zone
“Ikhasimende Kuqala” Kumele kube yiMantra
NgoMsombuluko, Okthoba 2, 2017 NgoLwesihlanu, Okthoba 6, 2017 UDan Purvis
Ukusebenzisa amandla obuchwepheshe obuningi bokumaketha obutholakalayo kuyisinyathelo esihle sebhizinisi, kepha kuphela uma ugcina ikhasimende lakho engqondweni. Ukukhula kwebhizinisi kuncike kubuchwepheshe, leli iqiniso elingenakuphikwa, kepha okubaluleke kakhulu kunanoma yiliphi ithuluzi noma ucezu lwesoftware ngabantu obathengisela kubo.
Ukwazi ikhasimende lakho lapho bengeyena ubuso nobuso kuletha izinkinga, kepha ivolumu ebanzi yedatha ezodlalwa nezindlela zokuthi abathengisi abanobuhlakani bangathola isithombe esibanzi kunanini ngaphambili. Ukulandela umkhondo ngamamethrikhi afanele nokwenza ukuhlaziywa kwezinkundla zokuxhumana okulungile kwenza ukubona amakhasimende angempela kulula kunakuqala futhi isiza ukuthuthukisa ukuqonda kwakho jikelele ngamakhasimende akho.
Ukuthi Ukulindela KweKhasimende Nensizakalo Kushintshe Kanjani
Amakhasimende asebengaphezu kokuqonda nje ukuthi angafinyelela kanjani kuma-brand, ikakhulukazi ngokukhula kwemithombo yezokuxhumana. Futhi-ke, lokhu kusho ukuthi okulindelwe kwabo sekube nzima kakhulu. Lesi sidingo akufanele sibonwe kabi yimikhiqizo njengoba kuyithuba eliqhubekayo lokunikeza insizakalo enkulu yamakhasimende kanye nokuhlangenwe nakho, futhi kubonise ikhwalithi yenkampani yabo.
Ukuhlinzekwa kwamakhasimende ngesikhathi sangempela sekuyinto ejwayelekile, nge ucwaningo olulodwa olusikisela ukuthi amakhasimende angama-32% alindele impendulo evela kumkhiqizo kungakapheli imizuzu engama-30, kanti amanye ama-10% alindele ukuthi okuthile kubuye kungakapheli imizuzu engama-60, kungaba phakathi “namahora okusebenza” noma ebusuku noma ngezimpelasonto.
Ububanzi bamathuluzi we-martech oyinkimbinkimbi atholakalayo ukuqoqa nokuhlaziya idatha kusize kakhulu futhi, ngokuhlaziywa kwewebhusayithi kuhlanganiswe kanye nokulandelwa kokuzibandakanya kwezenhlalo, imininingwane yolwazi yeCRM, nezibalo eziphathelene nokulanda noma izinombolo zokubhalisa. Umthamo omkhulu wezinhlobo ezahlukahlukene zedatha uvumela ukunemba ekukhombiseni amakhasimende okuqondiwe nokwakhiwa kwemikhankaso yakho ngokufanele.
Lokhu kuningi ukuphatha nokuphatha phezulu, futhi kuyaqondakala ukuthi umkhiqizo ungalwela ukugcina konke kuhlelekile. Kungakho ukutshala imali kubuchwepheshe obufanele kubaluleke kakhulu nokuthi kungani ukusebenzisa amathuluzi wezobunhloli bezenhlalo nesoftware laphaya kubalulekile. Ukusiza ukwenza lula ukuphathwa kwedatha yakho ukuze kuzuze amakhasimende akho lezi zinto ezilandelayo kufanele zibhekwe njengokuyinhloko.
Ukwazi ukuthi izimbangi zakho zenzani kumaphakathi ekutholeni amalungelo nokungalungile embonini yakho. Ungabeka abancintisana nabo ngokumane ulandele impumelelo yabo nokwehluleka kwabo ngokuthinta okuthandwayo nokungathandwa kwamalungu ezilaleli ezeqa.
Ukulandela umkhondo kwabaqhudelana nokubeka amabenchmark kukuvumela ukuthi uthole isikhundla sakho ngaphakathi kwemboni yakho futhi usebenzele ukuyithuthukisa lapho kudingeka khona. Ungahlaziya uhlobo olufanayo lwamamethrikhi emisebenzini yezokuncintisana yakho njengoba wenza eyakho, ulinganisela amamethrikhi ayize nedatha ebonakalayo ongayikhothoza.
Ukuqondiswa Kwezithameli Ezihlosiwe
Ngolwazi oluningi mayelana nezithameli zethu olutholakalayo, asikho isizathu sokuba singenzi okuqukethwe okwenziwe ngezifiso futhi silethe okuhlangenwe nakho okuhlukile kwamakhasimende. Kulesi sibonelo sezingubo nomkhiqizo we-homeware Okulandelayo kungenzeka ukuthi ubone kanjani ukuqonda izintshisekelo zamakhasimende abo kungabasiza bahlele imikhankaso ezayo.
Le datha ingahle ibonakale ingahleliwe kepha akunjalo. Uma ubhekisisa idatha kaSotrender, ikhombisa Okulandelayo ngqo lapho bazoyithatha khona imikhankaso yabo ngokuzayo nokuthi iziphi izihloko ezingabamba izethameli zabo ngempumelelo enkulu. Ukuba nalolu lwazi kubalulekile ekuhleleni imikhankaso yesikhathi esizayo nokusiza ekuqinisekiseni ukuthi babekwe kahle emazingeni aphezulu okuzibandakanya.
Afunani amakhasimende akho? Ungahle wazi ukuthi ufuna ukuthuthukisa ini kepha ngabe yilokho abantu abakufunayo? Ngisho nempendulo engacelwanga ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ingasetshenziswa kahle ekwakhiweni komkhiqizo futhi ungakhetha ukuqhubekela phambili futhi ubandakanye amakhasimende akho ekuthuthukiseni umkhiqizo wakho.
ICoca Cola ikwenze lokhu nge yabo Umkhiqizo weVitaminWater njengabo basebenze ne-fanbase yabo ye-Facebook ukuthola umuntu ozosiza ukuthuthukisa ukunambitheka okusha. Owinile unikezwe ama- $ 5,000 ukuthi asebenze nethimba lezentuthuko ekwakheni ukunambitheka okusha futhi kwaholela emazingeni amakhulu okuzibandakanya nabalandeli abangaphezu kwezigidi ezi-2 bakaVitaminWater Facebook abazibandakanya kwinqubo yokuthuthukisa umkhiqizo.
Ukutholwa Kokuthonya Nokukhomba
Kuyo yonke imikhakha manje kunethonya elibalulekile elihlonishwa kakhulu nokunakwa emphakathini we-inthanethi. AbakwaBrands balwela ukuxhumana nalaba bagqugquzeli, bachitha isikhathi esiningi ngisho nokutshalwa kwezimali ukwenza abakhohlisi ukuthi bakhuthaze futhi bakhuthaze umkhiqizo wabo.
Ngabathonya abakhulu nabancane abadingwayo kakhulu, ibhizinisi lakho lidinga ukuthola labo abangamela ibhizinisi lakho futhi bafaniswa kakhulu nekhasimende lakho oqonde kulo. Nge-mantra 'yamakhasimende yokuqala' kufanele ubheke abathonya abasho okuthile kuzithameli zakho futhi abangaba ukwengeza okubalulekile emizamweni yakho yokumaketha, kunokuba nje kube “yinoma ngubani” onegama nesibalo somlandeli onesizotha. Ukuhlonza abathonya abafanele bomkhiqizo wakho kubaluleke kakhulu empumelelweni kubuciko obucashile be ukumaketha kwamathonya.
Ufuna ukubeka umkhiqizo wakho njengamakhasimende aziqhenyayo ngokuwukhulumela, kepha ukuze uzuze ukumelwa kufanele ugxile ngokuphelele kumakhasimende. Kulula kakhulu ukusongwa ngobuchwepheshe bese ukhohlwa isici somuntu semizamo yakho yokumaketha. Ubuchwepheshe bukhona ukusiza nokusiza ekuletheni okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kwamakhasimende.
Tags: ukulinganisaUkuhlaziywa komncintiswanoikhasimende kuqalaFacebookukuqondisa izethameli
Ngabe Ukuthenga Okuhlelwayo Kuthenga Ukubulala Idumela Lakho?
3 Izindlela Zokuthengisa Izingxoxo Zishintshile Ngokuhamba Kweminyaka